Starch juputara eriri bio-plastik PLA PBAT-China Starch jupụtara onye na-eweta eriri Bio-plastic PLA PBAT, Factory –Jwell
Starch jupụtara Bio-plastic PLA PBAT compounding line
Ika aha: Uchechi
asambodo: ISO O.A.
Kacha nta Order ibu: 1
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: 30% ala ugwo site T / T, 70% ezumike ugwo tupu Mbupu site T / T.
E mepụtara plastik n'ọtụtụ ebe n'ihi uru nke ịdị arọ, ike dị elu, njirimara kemịkalụ kwụsiri ike yana ọnụ ala dị ala. Industrylọ ọrụ plastik na-emepe ngwa ngwa, ọ nweghịkwa ụzọ kwesịrị ekwesị iji kpochapụ plastik eji, nke na-akpata nnukwu Mmetọ siri ike dịka plastik ga-emetọ gburugburu ebe obibi, lie ya nke ukwuu ga-abata ala ahụ, ọkụ ga-emetọ ikuku, ndị a abụghị isi ihe kpatara nsogbu ahụ. Isi ihe edoziri nsogbu a bụ imepụta plastik ndị na-emebi emebi karịa plastik ndị na-enweghị ike ibibi.
L / ik
+ 55% Stachi
+ 15% Glycerine
Dosing usoro ：Akụrụngwa nke bio-plastic, stachi na plasticizer na-nri n'ime ejima ịghasa extruder via ezi LIW feeders iche iche na elu na akpaaka na mgbanwe ịgbanwe ukpụkpụ.
Nhazi usoro ：torque gearbox, eyi na-eguzogide ọgwụ & corrosive eguzogide orù na ịghasa ọcha, elu torque aro na nchekwa ipigide, oru oma kpo oku na kpọmkwem akara iji hụ na mụ, a pụrụ ịdabere na ogologo okwu mmepụta.
Mmiri n'okpuru mmiri ọnwụ ：N'iru n'ihu mmiri ọnwụ usoro nwere ike na-emepụta elliptical pellet na nnukwu akpaaka, mechiri emechi usoro enweghị emission nke anwụrụ ọkụ na ájá na gburugburu ebe obibi na ike imeghari ka dị iche iche ikike chọrọ.
Downstream inyeaka equipments ：Ngwá ọrụ bara ọgaranya na nke ezi uche dị na ya na-aghọta homogenization, sieving, drying & jụrụ ruo mgbe ị ga-eji nwayọ rụọ ọrụ.
Multikwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi corrugated Board Extrusion Line
Sistemụ Mgbanwe ihuenyo hydraulic
Ogbe na ihe nkedo maka igwe ntụtụ
HDPE, eyi, PVC Vetikal Ụdị Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe na ịkwanyere Ribbed Pipe extrusion akara